No.80 (A1,B2), Kanbawza Lane(2), Golden Valley, Bahan Township, Union of Myanmar
|| Email: admin@mgfgolf.org || Tel: + +95-1-538 016
TOURNMENT LOCAL PROFESSIONAL
MYANMAR GOLF TOUR 2016 (MANDALAY)
All day Draws and Results
MYANMAR GOLF TOUR (2016) PRESENTED BY MWD BANK LIMITED HANTARWADDY GOLF &COUNTRY CLUB, BAGO 9-12 JUNE 2016
4 day draw and results
MYANMAR GOLF TOUR(2016) ROYAL MYANMAR GOLF CLUB(NAY PYI TAW)FINAL DAY RESULTS
YCDC CUP OPEN GOLF CHAMPIONSHIP 2016 ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနား ကျင်းပ
ရန်ကုန်မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးက်ေမတီ၏ ဦးဆောင်မှု့ဖြင့် မြန်မာ ပီဂျီအေ(Myanmar PGA) နှင့် မြန်မာနိုင်ငံ ဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ်တို့ မှကြီးမှူး၍ Yangon Triple Co., Ltd ကအဓိကကူညီ ပံ့ပိုးသော YCDC Cup Open Golf Championship 2016 Presented by Yangon Triple ဂေါက်သီး ရိုက်ပြိုင်ပွဲ၏ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားကို ဇန်န၀ါရီ (၁၃) ရက် နံနက်ပိုင်း တွင် ရန်ကုန်မြို့၊ အင်းစိန်မြို့နယ်ရှိ မြို့တော်ဂေါက်ကွင်း (ငွေသော်တာ)အမှတ် (၁)တီခုံ၌ကျင်းပသည်။ .....
WORLD JUNIOR GOLF SERIES 2015
World Junior Golf Series 2015 ကကြီးမှုး၍ ဒီဇင်ဘာ ၂၈ ရက်မှ ၃၀ ရက်အထိ အမေရိကန်နိုင်ငံ၊ ဖလော်ရီဒါပြည် နယ် Slammer & Squire Course ၌ကျင်းပခဲ့သော နိုင်ငံပေါင်း (၃၀) ကျော်မှ လူငယ် ဂေါက်သီးရိုက်အားကစားပါဝင်သော World Junior Golf Series နောက်ဆုံး ပြိုင်ပွဲတွင် .....
NOMURA CUP 2015
2015 NOMURA CUP THE 27th ASIA PACIFIC AMATEUR GOLF TEAM CHAMPIONSIP
PUN HLAING GOLF CLUB JUNIOR CHAMPIONSHIP 2015
THAILAND GOLF ASSOCIATION 55 TH SOUTH EAST ASIA AMATEUR GOLF TEAM CHAMPIONSHIP 2015
55 th PUTRA CUP,9th LION CUP,7th SANTI CUP,3rd KARTINI CUP ......
၂၀၁၅ ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင်းပတ်လည်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်(နေပြည်တော်)
မြန်မာနိုင်ငံဂေါက်သီးအဖွဲ့ချုပ် နှင့်မြန်မာပီဂျီအေတို့က ကြီးမှူးကျင်းပ၍ အင်းဝဘဏ်လီမိတက်မှ အဓိက ကူညီ ပံ့ပိုးပေးသော ၂၀၁၅ခုနှစ် မြန်မာပြည်တွင်း ပတ်လည်ဂေါက်သီးရိုက်ပြိုင်ပွဲ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်(နေပြည်တော်)၏ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် (၆း၃၀)နာရီခွဲက နေပြည်တော်ရှိ ဇေယျာသီရိ ဂေါက်ကလပ်တွင်ကျင်းပသည်။ ......
Home || Federation || Committee || News Letters || Golf Development || Tournment
© 2015 Myanmar Golf Federation. All Rights Reserved. Powered by Cyber Web Media.